"Education for Myanmar Youths": ကိုယ်တွေ့မြန်မာ့ပညာရေး (အပိုင်း-၁)
Posted by Khin Ma Ma Myo at 5:44 PM
ပြည့်စုံပါတယ် ... အဲဒီလိုပဲ ခံစားနေရတယ် .. ကျေးဇူး ... :)
from your name, and from your writing style.. and about u mentioning about eco teacher, r u by any chance from BEHS 4, taunggyi?? i just feel like the feelings were familiar to me.
Sure Ma Thinzar. I am from BEHS (4) Taunggyi, 1996 Batch. Very nice to meet you
online. Let's get in touch.
owh.. great!! i'm 2001 batch.. but i knew most of the clever seniors even though they don't know me. Your name is somehow unique that makes me remember.. :)
ခင်မမမျိုးရဲ့ အတွေ့ အကြုံ နဲ့ ခံယူချက်တွေကို ခုလိုတင်ပြထားတာကို ဖတ်ရတာ အရမ်း နှစ်ခြိုက်မိပါတယ် ။ ဆက်လည်း စောင့်မျှော်နေပါဦးမယ် ။
တွေ့ပါပြီ .. မခင်မမမျိုးကို ။
တော့တိုးချန် ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ အမသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော့တိုးကတော့ Saya Tony ဆီမှာ IELTS တက်တုန်းက လအနည်းငယ်တွေ့လိုက်ရတဲ့ မခင်မမမျိုးကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘဲ အမြဲအမှတ်ရနေတာပါ။ အမရဲ့ စာသံပေသံကို နားထောင်ကြည့်တာနဲ့၊ UK ပညာရေးအကြောင်းတွေပြောနေတာကို ဖတ်ရတာနဲ့ ဒီမခင်မမမျိုးက တော့တိုးသိတဲ့ မခင်မမမျိုးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ အခုလို နာမည်ရင်းနဲ့ စာရေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ မဟုတ်ရင် တော့တိုး ပြန်ရှာလို့လွယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တော့တိုးအခု UK မြောက်ပိုင်းမှာပါ။ အမကို ဘယ်လိုများ ပြန်ဆက်သွယ်နိုင်မလဲ မသိဘူး။ အမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို အရင်ကတည်းက နှစ်သက်သဘောကျခဲ့တာပါ။ အခုလို စာအဖြစ်နဲ့ ပြန်ဖတ်ရတော့ အင်မတန်နှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ အားပေးနေလျှက်ပါနော်။ အမနဲ့လဲ ပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ်။